အဆိုပါ 1880 ရဲ့စဉ်အတွင်းနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလျှပ်စစ်ကုလားထိုင်၏တီထွင်မှုများအတွက်ဇာတ်စင်ထားကြ၏။ 1886 ခုနှစ်အစ, နယူးယောက်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မြို့တော်ပြစ်ဒဏ်၏အခြားပုံစံများကိုလေ့လာမယ့်ဥပဒေပြုကော်မရှင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆွဲထားပြီးတော့အထဲကတင်ဆောင်၏နံပါတ်တစ်နည်းလမ်းခဲ့ သေဒဏ် ကွပ်မျက်၏သိပ်နှေးကွေးခြင်းနှင့်နာကျင်တဲ့နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားပင်နေစဉ်။ နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုကုမ္ပဏီကြီးများအကြားကြီးထွားလာပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
တို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါအက်ဒီဆင် General Electric ကုမ္ပဏီ သောမတ်စ်အက်ဒီဆင် DC ကဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကိုယ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဂျော့ခ်ျ Westinghouse AC အဝန်ဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် Westinghouse ကော်ပိုရေးရှင်းစတင်ခဲ့သည်။
AC အကဘာလဲ? DC ကဘာလဲ?
DC က (တိုက်ရိုက်လက်ရှိ) ဖြစ်ပါသည် လျှပ်စစ်လက်ရှိ တစ်ဦးတည်းသာဦးတည်စီးသော။ AC အ (လက်ရှိပြောင်း) ဖြစ်ပါသည် လျှပ်စစ်လက်ရှိ ပုံမှန်ကြားကာလမှာတိုက်နယ်အတွက်ဦးတည်ချက်နောက်ကြောင်းပြန်သော။
DC ကဝန်ဆောင်မှုကြေးနီစျေးနှုန်းများအဲဒီအခြိနျမှာမြင့်တက်ခဲ့သည်ထူကြေးနီလျှပ်စစ်ကြိုးတွေ, မှီခို, DC ကဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု DC ကမီးစက်အနည်းငယ်မိုင်ထက်ကျော်လွန်နေသောဖောက်သည်များထောက်ပံ့နိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်သဖြင့်ကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ သောမတ်စ်အက်ဒီဆင် AC အနည်းပညာသုံးစွဲဖို့မလုံခြုံခဲ့ကြောင်းဟုဆိုကာသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် Westinghouse ဆန့်ကျင်နေတဲ့ smear ကမ်ပိန်းကိုစတင်အားဖြင့် AC အဝန်ဆောင်မှုဆုံးရှုံး၏အလားအလာကိုမှတုံ့ပြန်။ 1887 တွင်အက်ဒီဆင်သတ္တုပန်းကန်ကပူးတွဲခြင်းနှင့်ဓာတ်အားသတ္တုပန်းကန်ပေါ်တွင်ဆင်းရဲသားကိုသတ္တဝါများအားမရသဖြင့်တဒါဇင်တိရိစ္ဆာန်များကွပ်မျက်တဲ့ 1000 ဗို့ Westinghouse AC အမီးစက်ဖွင့် setting ဖြင့်သူ၏စွပ်စွဲချက် supporting, အနောက်လိမ္မော်ရောင်, နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွင်းရှိလူထုဆန္ဒပြပွဲကျင်းပခဲ့တယ်။
အဆိုပါစာနယ်ဇင်းပုကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ကိုဖော်ပြလယ်တစ်ရက်ခဲ့ရပြီးသစ်ကိုသက်တမ်း "ဓါတ်" လျှပ်စစ်မီးအားဖြင့်သေခြင်းတရားကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဇွန်လ 4, 1888 တွင်နယူးယောက်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်နှစ်ခုအလားအလာဒီဇိုင်းများ (AC နဲ့ DC က) တည်ရှိစဉ်ကတည်းကသို့သော်ကြောင့်ဖြစ်သောဆုံးဖြတ်ကော်မတီမှထွက်ခွာခဲ့သေဒဏ်စီရင်၏ပြည်နယ်၏အသစ်ကတာဝန်ရှိသူတဦးကနည်းလမ်းအဖြစ်ဓါတ်ထူထောင်ဥပဒေလွန် ရွေးချယ်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
အက်ဒီဆင်တက်ကြွစွာစားသုံးသူကွပ်မျက်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့၎င်းတို့၏နေအိမ်များအတွက်လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှု၏တူညီသောအမျိုးအစားမလိုချင်မယ်လို့မျှော်လင့်သည့် Westinghouse ကုလားထိုင်၏ရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်မဲဆွယ်။
နောက်ပိုင်း 1888 ခုနှစ်, အအက်ဒီဆင်သုတေသနစက်ရုံတီထွင်သူ Harold ဘရောင်းငှါး၏။ ဘရောင်းမကြာသေးမီကလူငယ်တစ်ဦးလူကလေး AC အကလက်ရှိအပေါ်အပြေးတစ်ဦးထိတွေ့ကြေးနန်းဝါယာကြိုးထိပြီးနောက်ကွယ်လွန်သွားဘယ်မှာဖြစ်တဲ့ Fatal မတော်တဆမှုဖော်ပြက New York Post မှစာတစ်စောင်ရေးလိုက်တယ်။ ဘရောင်းနှင့်သူ၏လက်ထောက်ဆရာဝန် Fred သည် Peterson လူသိရှင်ကြားပြုလုပ်ပြီးတော့ AC အအလျင်အမြန်အသတ်ခံရပုံကိုသရုပ်ပြဖို့ AC အဗို့အားစမ်းသပ်သေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သူသည်ဆင်းရဲသောသူဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များကျန်ရစ်သော်လည်းမပြ, DC ဗို့အားနှင့်အတူစမ်းသပ်အက်ဒီဆင်များအတွက်လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်ဒီဇိုင်းစတင်ခဲ့သည်။
ဆဲအက်ဒီဆင်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ခလစာအပေါ်နေစဉ်ဆရာဝန် Peterson, လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအစိုးရကကော်မတီတစ်ရပ်၏ဦးခေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကော်မတီ AC အဗို့အားနှင့်အတူလျှပ်စစ်ကုလားထိုင်ပု statewide ထောင်ထဲမှာ system အတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်တဲ့အခါမှာဒါဟာအံ့သြစရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဇန်နဝါရီလ 1, 1889 တွင်, ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးလျှပ်စစ်ကွပ်မျက်ဥပဒအပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့သွားလေ၏။ Westinghouse ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကန့်ကွက်ခြင်းနှင့်အကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်များထံသို့တိုက်ရိုက်မဆို AC အမီးစက်ရောင်းဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ သောမတ်စ်အက်ဒီဆင်နှင့် Harold ဘရောင်းကိုပထမဦးဆုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်များအတွက်လိုအပ်သော AC အမီးစက်ဖြစ်သည်။
ဂျော့ခ်ျ Westinghouse သောမြေပေါ်တွင် လုပ်. , ဓါတ်အားဖြင့်သေဒဏ်ကိုပထမဦးဆုံးအကျဉ်းသားများအတွက်အယူခံရန်ပုံငွေ "ဓါတ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောပြစ်ဒဏ်ခဲ့ပါတယ်။ " အက်ဒီဆင်နှင့်ဘရောင်းနှစ်ဦးစလုံးသေဒဏ်စီရင်သည်အသေခံမယ့်မြန်ဆန်ပြီးနာကျင်မှု့မရှိတဲ့ပုံစံကြီးနှင့် New York မြို့၏ပြည်နယ်အယူခံအနိုင်ရသောပြည်နယ်အဘို့သက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ဖြစ်ချင်တော့, နှစ်ပေါင်းများစွာကလူ "Westinghoused" ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကုလားထိုင်များတွင်ဓာတ်ခံ၏လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။
Westinghouse ၏နိဂုံးကိုအပေါ်ကိုရောက်စေဖို့အက်ဒီဆင်၏အစီအစဉ်မအောင်မြင်ခဲ့, ထိုသို့မကြာမီ AC အနည်းပညာ DC ကနည်းပညာစှာထက်သာလွန်ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ အက်ဒီဆင်နောက်ဆုံးတော့သူသညျမိမိဒီတော့အားလုံးတလျှောက်ထင်ခဲ့ကွောငျးနှစ်ကြာပြီးနောက်ဝန်ခံခဲ့သည်။
အဆိုပါပျံ Shuttle နှင့်ယောဟန်ကေး
သင့်ရဲ့ Address ကိုကနေဒါအခွန်ဝန်ကြီးဌာနအေဂျင်စီနှင့်အတူပြောင်းနည်း
အီတလီကြိယာ Divertirsi များအတွက် conjugation ဇယား
သင့်ရဲ့ဂျက်ဇ်ဂီတငွေကောက်ခံ Start 10 ဂရိတ်ခံ
"ပထမနို" Chord & Lyrics
Woodrow Wilson - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှစျဆယျ့ဌမကသမ္မတ
တစ်အောင်မြင်သောကျောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးကွဲပြားခြားနားသောမ 10 အရာ
ကို 'သုံးကလပ် Monte' 'ဂေါက်ဂိမ်း Play လုပ်နည်း
ပြင်သစ်သမ်မာကမျြး '' ဝိဇ္ဇာအတတ်အား '' ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်အသုံးပြုမှု
အားလုံးငါး States မှာတစ်ဦးကနေရာအမည်?
အဆ function ဖြေရှင်းရေး: အမူရင်းငွေပမာဏရှာဖွေခြင်း
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု Ethical လား?